IMEX America Smart Monday keynotes gosipụtara dọkịta, ịgba egwu na guru dijitalụ
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » USA » IMEX America Smart Monday keynotes gosipụtara dọkịta, ịgba egwu na guru dijitalụ
7 min gụọ
Usoro mmemme zuru oke nke mmụta na-aga na ngosi IMEX America niile, na-ebido ụbọchị ọ bụla site na isi okwu MPI - usoro nke ndị na-agagharị agagharị na mpụga ụlọ ọrụ na-ahụ maka azụmaahịa nke onye ọ bụla ga-eweta echiche ụwa ha pụrụ iche na mmemme ahụ.
Mbido ikwu okwu na IMEX America MPI keynotes ga-abụ onye mmeri na - emeri Harvard - dọkịta zụrụ azụ.
Onye na-esote n'ahịrị ahụ, bụ onye nwere ọdịiche dị ka "ndị edemede kachasị mma n'ụwa."
N'ikpeazụ, onye malitere otu agba egwu zuru ụwa ọnụ. Ndị a bụ ndị isi okwu na IMEX America na Las Vegas na Nọvemba a.
IMEX AMERICA MPI isi okwu
• Dr. Shimi Kang bụ onye dọkịta na-enweta mmeri nke Harvard, ọkachamara na mgbasa ozi na onye nkụzi na-akpali akpali mmadụ. Site na afọ 20 nke ahụmịhe ahụike na nyocha dị ukwuu na sayensị nke dị n'azụ njiri ọgụgụ isi mmadụ, Shimi setịpụrụ iji nye ngwaọrụ bara uru iji zụlite isi nke narị afọ nke 21 nke nnagide, njikọ, okike, na ndị ọzọ.
• Onye na-ere akwụkwọ kacha mma bụ Erik Qualman ga-enyocha "socialnomics" - ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị, yana otu azụmaahịa nwere ike isi nweta ike ya. Ndị otu ụlọ ọrụ ejirila ndụmọdụ ndụmọdụ dijitalụ ya mee ihe dị iche iche gụnyere National Guard na NASA ma mee ka a họpụta ya ịbụ otu n'ime 'ndị edemede kachasị amasị ya n'ụwa'.
• Dị ka ngalaba-onye nchoputa na onye isi oche nke ịgba egwu ụwa, Radha Agrawal maara ihe ọ ga-ewe iji wuo obodo. Daybreaker, ụtụtụ na-agba egwu n'oge na-adịghị anya n'isi, na-eme ihe omume n'obodo iri abụọ na ise gburugburu ụwa yana obodo nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mmadụ na Radha ga-ekerịta otu o si mee ka agbụrụ a dị ike, na-egwu egwu.
Mmụta na-amalite na Smart Monday
Smart Monday, nke MPI kwadoro, bụ mwepụta mpempe maka mmemme agụmakwụkwọ IMEX na IMEX America. Na-ewere ọnọdụ na Nọvemba 8, Smart Monday bụ ụbọchị mmụta zuru oke tupu ngosi ahụ emepe na November 9 - 11. Emegharịala mmemme a iji gosipụta mkpa mgbanwe nke ndị ọkachamara n'ihe omume na ụlọ ọrụ siri ike gbado anya na iwuli elu karie.
N'ime ndị na-ekwu okwu a bụ: Janet Sperstad, Onye Nduzi Ngalaba, Nchịkwa Azụmaahịa Omume na Madison College; Guy Bigwood, Onye isi nchịkwa nke Global Sustainable Sustainability Movement na onye edemede nke IMEX Akụkọ regenerative Revolution; na David Allison, nchoputa nke Valuegraphics, a ụkpụrụ-chụpụrụ na ezi uche obibia ahịa.
A ga - enwe nnọkọ site na IAEE, EIC na MPI, gbakwunyere She Means Business nke na-achịkọta ndị isi ụmụ nwanyị iji kwalite mkparịta ụka gbasara ụdị dị iche iche na nha anya na ngalaba ihe omume azụmaahịa.
Annette Gregg, SVP nke Ahụmịhe na MPI, na-ekwu, sị: “Obi dị anyị ụtọ ọzọ ị bụrụ onye nkuzi mmụta maka IMEX America, mmemme Smart Monday na isi okwu kwa ụbọchị. Anyị ejikọtara ọnụ ọgụgụ dị mma na nke nwere nnukwu mmetụta nke ndị na-ekwu okwu na-ekwu banyere mmepe onwe onye na nke ọkachamara. Anyị na-ele anya IMEX America ọzọ ga-aga nke ọma maka obodo anyị. ”
Carina Bauer, onye isi oche nke IMEX Group na-akọwa, "Usoro mmuta anyị abụrụla isi nkuku nke IMEX America." “Ọ dịghị mgbe karịa afọ a mgbe ndị ọrụ azụmaahịa na-achọsi ike na njikọ na ịnyagharị ebe azụmahịa dị iche. Obi dị anyị ụtọ na anyị na MPI ga -ewepụta usoro isiokwu dị egwu, ndị ọkachamara niile n'ọhịa ha, na -ekekọrịta echiche ọhụrụ banyere omume mmadụ site n'ọtụtụ akụkụ. Drikwọ akparamagwa achọrọ, dị ka anyị si mara, na-anọ n'etiti isi atụmatụ na ogbugbu ọ bụla. ”
Ọzọkwa nkọwa banyere zuru Smart Mọnde mmemme ga-ekpughe n'oge na-adịghị anya.
registration emepere ugbu a maka IMEX America na-ewere ọnọdụ 9 - 11 Nọvemba na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na 08 November. Iji debanye aha - n'efu - pịa Ebe a.
Ebumnuche nke IMEX bụ ijikọ ọnụ na ịkwalite ụlọ ọrụ nzukọ - na-eme ihe niile ọ nwere ike ime iji kụziere ihe, imepụta ihe ọhụrụ, ma nyere ndị sonyere aka ka ha na ndị nwere ezigbo njikọ. Worldwa ebe ezigbo azumahia kariri oke ala na oke osimiri, ebe ndi nzuko nzuko nwere ike jikoo ya na ndi n’enye ahia n’uwa nile wee wulite mmekorita oru ike - nke ahu bu IMEX.
Ogo na-egosipụta ihe niile IMEX na-eme, site n'ụdị ọ na-akpụzi ihe ngosi ya ka ọ daba ndị sonyere ya, ruo na ụzọ ọ na-eji nlezianya enyocha ihe niile gbasara ha. IMEX kwenyere n'ike nke ikpokọta ndị mmadụ ịkekọrịta echiche, ịchọpụta ngwa ọrụ ọhụụ, mụta nka ọhụrụ, ma kpalite ọhụụ.
eTurboNews bụ onye mgbasa ozi maka IMEX America.
Business Las Vegas Management Mandalay nkwado
Lufthansa maliteghachiri ụgwọ ụgbọ elu North America na Asia site na ọdụ ụgbọ elu Munich
Ga njem na Hawaii mgbe a gbara ọgwụ mgbochi: Iwu ọhụrụ
Ndị nnọchi anya Bahamas na-ezukọ na ndị isi ọrụ njem nlegharị anya na…
Global Solar Micro Inverter Market na-abawanye na 16.6% ...
US, Germany, Belize, Indonesia, Senegal nabatara ọhụrụ ...
Usoro ọgwụgwọ ewepụtara n'oge ọgwụgwọ ọrịa kansa ara...
Mmelite ọhụrụ na ọgwụgwọ dị irè megide ndị ike ike...
Mmekọrịta nnwale ụlọ ọgwụ ọhụrụ maka ọgwụgwọ nke...
Mmemme nkwụghachi ụgwọ zuru ụwa ọnụ ọhụrụ nwere àgwà
Ngwọta Mmezi akwara ọhụrụ na-eji teepu
Ọdụ ụgbọ elu Duesseldorf bụ mmalite: enyemaka…
Nsonaazụ ọhụrụ dị mma maka ọgwụgwọ Psoriatic...
Amachibidoro iwu mgbochi awa 36 na Sri Lanka tupu eme atụmatụ…
Ọnye na-bụ Minister nke Tourism na Saudi Arabia?
Ista mgbapụ na nkwari akụ Arts Barcelona: Mediterranean...
American Queen Voyages kwupụtara ọkwa onye isi ala ọhụrụ
Bricks anyanwụ na-agbanwe ụlọ ka ọ bụrụ ike ike...
WTN toro usoro ọhụrụ maka ụlọ ọrụ njem iji kwụsị ...
Nyocha ahịa teepu nchekwa na arịrịọ na amụma...
VisitBritain na British Airways na-eso ndị njem nlegharị anya US
Caribbean na-esonye na Airbnb Live na-arụ ọrụ ebe ọ bụla ...
Fraport na-ere òkè ya na ọdụ ụgbọ elu Xi'an
Onyinye ego nke Guam Fun kwa izu na-aga nke ọma
India Waterways Conclave 2022 nwere ike weta ịwa ahụ na…
Dual GM ọhụrụ akpọrọ aha maka Ụlọ Hyatt na Hyatt ...
Kedu ihe pụtara ezigbo njem na Mariott Bonvoy?
Ọhụrụ Medical Tourism Trend Rocks Hard na Guadalajara…
Ọgwụgwọ Tissue Bioengineered Ọhụrụ iji gwọọ ụdị 1...
Ụgbọ mmiri NCL nwere mmadụ 4,600 nọ n'ụgbọ ahụ gbadara n'ala ...
Cathay Pacific: kwụọ ụgwọ ụlọ ma nweta Asia Miles ugbu a
Njem ahụike na ịdị mma na-ewu ewu na Spanish...
More na Barbados karịa Sunny Beach: Dị ka Ọ bụrụ na ...
Ụgbọ elu ikuku - zere okporo ụzọ na ebe ndị njem nlegharị anya na-ekwo ekwo
Templelọ nsọ dị na Buddhanilkantha bụ ọla edo zoro ezo nke Nepal. Nwee obi ụtọ njem nlegharị anya eTN bụ Scott MacLennan na Nepal. The Breaking News Show taa na Dr. Peter Tarlow na Juergen Steinmetz na-enyocha taxi ikuku. Kedu ihe kpatara ịkwọ ụgbọ ala siri ike na obodo ndị njem nlegharị anya, ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ụgbọ elu tagzi. Nke a bụ ọhụrụ […]